नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अधर्मी ज्यानमाराहरु लाई के दसैं, के तिहार !
अधर्मी ज्यानमाराहरु लाई के दसैं, के तिहार !
काठमाडौं । धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले दसैँ मनाउने कोही पनि कम्युनिष्ट हुनै नसक्ने दावी गरेका छन् । उनीहरुले दशैँ मनाउनेहरुलाई अन्ध विश्वासीको संज्ञा दिदै आफुहरुले दशैँ नमान्ने गरेको जानकारी दिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलले कम्युनिष्टहरुले धर्म नमान्ने भएकाले आफुहरुले दशैँ नमान्ने गरेको बताउनुभयो।